GTT International - Genève: Alarobia 28/09/2011 - Hetsika niarahan'ny VOT sy ny Fianakavian'ny voafonja 2009
Alarobia 28/09/2011 - Hetsika niarahan'ny VOT sy ny Fianakavian'ny voafonja 2009
Nidina an-dalambe nilanja sorambaventy ny VOT sy ny fianakavian' ireo gadra politika zay mbola any amponja. Nanomboka tamin'ny 2ora tolak'andro ny hetsika ary nizotra nakany ankianja Magro.
Mitaky tsy misy fepetra izy ireo ny ampiharan'ny Iraisam-pirenena, indrindra ireo vondron'ny mpanelanelana vahiny sy ireo mpitondra tsy ara-dalana be marenina ireo ny zavatra voatapaka sy nifampiraharahana mba ho famahana ny krizy eto Madagascar izay mampitondra faisana tokoa ny vahoaka madinika Malagasy.
Nohamafisin'izy ireo koa ny fampodina tsy misy fepetra eto an-Tanindrazana an'Atoa Filoha Marc Ravalomanana, Filoha lanim-bahoaka. Ary tsy hangina izahay hoy izy ireo raha tsy migadona eto an-Tanindrazana ny Filoha lanim-mbahoka taminy fomba madio sy demokratika.
Notakian'izy ireo koa ny famoahana tsy misy hatak'andro ireo gadra politika sivily sy miaramila izay mbola ataon'ny FAT takalon'aina any amponja hatramin'izay ka hatramin'izao. Nohamafisiny koa fa manjaka tanteraka ny fanosihosena ny zon'olombelona eto Madagasikara ankehitriny. Ka nanao antso avo ho an'ny vondrona iraisam-pirenena izy ireo fa mijaly ny vahoaka Malagasy ary noana sy miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka.
Tsipahin'izy ireo an-kitsirano ny fanomezana avara-patana ireo mpanongam-panjakana eo amin'ny sehatra rehetra.
Noho izany rehetra izany dia hitohy ny Tolona ary tsy hijanona fa hiakatra avo dia avo ny hetsika atao. Tsy hiantehatra amin'ny mpanao politika izahay Vahoaka hoy ihany izy ireo fa hijoro manerana ny faritra rehetra eran'ny Nosy ary hitohy hatrany ny hetsika an-dalambe.
Anonyme 29 septembre 2011 à 20:15
Zay ahay mba tiako,mankahery anareo ny tenanay.Tsy maintsy hanatevindaharana raha vao tafakatra any Iarivo eh.Tohizo